SEO iri papeji: chii icho uye maitiro ekuchinatsiridza muCommerce | ECommerce nhau
Kugadzira eCommerce chimwe chinhu chiri nyore kwazvo kuita nhasi. Kunyangwe iwe uine bhizinesi repanyama uye uchida kuve paInternet, kana kuwedzera kuti utengese kwete kwaunogara chete, asi zvakare mukati menyika, kana kunyangwe kunze kwayo, chokwadi ndechekuti iyi ndiyo imwe yenzira dzakanakisa. Asi sekungofanana iwe zvaunofanira kubata nezvinetso munzvimbo yepanyama, mune chaiyo iripo zvakare. Uye imwe yeakanyanya kuomarara ndeye SEO papeji.
Wakambonzwa nezvake here? Iwe unoziva here kuti chii chainoshandiswa uye nei uchifanira kuchivandudza? Kana iri pfungwa iyo iwe yawakanzwa nezvayo asi haina kujeka kwauri, kana kuti iwe hauzive nzira yekutaura nayo kune yako eCommerce, pano tinokupa makiyi kuti iwe uinzwisise uye zvakare akanakisa.
1 Chii chiri SEO papeji
1.1 Saka chii chiri papeji SEO ye?
2 Maitiro ekuita yakanaka SEO pane peji
3 Maitiro ekuvandudza iyo muCommerce
Chii chiri SEO papeji
Kutanga, unofanirwa kunzwisisa kuti izwi iri rinorevei. Izvo zvinobva chaizvo kuChirungu uye nderimwe remazwi atinoshandisa kureva kune izvo optimizations zviri papeji. Ndokunge, kuti iwo magwaro akaiswa zvakanaka, kuti kune mazwi akakosha avanotiwana nawo, kuti Google inotiona se peji rinoverengwa ...
El SEO iri papeji inoreva kumisikidzwa, uye nekudaro zvinoenderana nekugadzirisa kwechitoro chako chepamhepo kugadzirisa uye kushanda neiyo HTML kodhi kuti iite zvinoenderana nezvakakurudzirwa neGoogle kuitira kuti chinzvimbo chikwire uye izvo zvinoreva kuve mumhedzisiro yekutanga yeinjini yekutsvaga.
Saka chii chiri papeji SEO ye?
Fungidzira kuti iwe unofanirwa kuvaka nhare ine zvidimbu zvakawanda. Iwe une mufananidzo wekuti imba yacho inofanira kunge iri sei. Zvakare pamwe nemimwe mirayiridzo inokuudza zvaunofanira kuita kuti iite kunge iri pamufananidzo. Zvakanaka, webhusaiti yakafanana neiyo.
Mufananidzo wacho unenge uri peji rako rewebhu rakavakwa, izvo zvaunoona. Asi ingadai isina chinhu. Zvino, uchitevera rairo (iyo mune ino Google inokupa) iwe unogona kuisa zvidimbu (zvemukati, zvinongedzo, mazwi akakosha, nezvimwewo) pamwe neiyo peji kuti "upe hupenyu".
Kana iwe uchizviita nemazvo, izvo Izvo zvinokanganisa kumisikidzwa kwepeji, nekuti urikutaurira Google basa reiyo peji uye kuti iwe waita zvese mushe kuva "padhuze neGoogle." Uye, kana Google ikaona kuti hausi kuita zviri pamutemo, unogona kupedzisira wakaderera kwazvo muinjini yayo yekutsvaga, kana kuzvivharira kubva pamhedzisiro. Saka chenjera "kubiridzira" kana kushandisa maitiro aunofunga kuti haana kunaka.
Maitiro ekuita yakanaka SEO pane peji
Izvo zvakakosha uye zvakakosha zvinhu zve pa-peji SEO zvinotevera:
Musoro wemapeji. Peji rega rega rinofanirwa kunge riine zita rakanaka, risingapfuuri mavara makumi manomwe uye rinoenderana nezvichawanikwa nemushandisi (neGoogle).
Meta tsananguro. Ichi chidimbu chemavara chinoiswa pazasi pezita remusoro wenyaya. Kana iwe ukazvitarisa uye ukatsvaga muGoogle, uchaona kuti chinhu chekutanga (panowanikwa chinongedzo chekubaya, ndicho zita). Izvo zvinoonekwa pazasi ndiyo inonzi meta tsananguro. Iwe unofanirwa kuita nepese paunogona napo, usingapfuuri anopfuura zana mavara zana kana zvichikwanisika, uchitsanangura zvichawanikwa pane iro peji. Uye hongu, iwe unofanirwa kuzviita kubva kune ako ese mapeji.
URL. Chimwe chinhu chakakosha pane peji SEO. Zvakanakisa, bvisa zvinyorwa, zvisungo, zvirevo ... uye siya mazwi ekufarira chete.
Misoro. Google inovada. Kazhinji zita re peji rine musoro H1, asi kana uchigadzira zvinyorwa zvemapeji unofanirwa kushandisa mamwe misoro (H2 neH3 mashoma).
Mifananidzo. Kwechinguva ikozvino, Google inoisa kukoshesa kwakawanda pamifananidzo, kwete chete kuti iwo akareruka kuti akwanise kurodha nekukurumidza, asi zvakare kuti akagadziridzwa, nemusoro wadzo, imwe zita remusoro uye ngano.
Yemukati kubatanidza. Ndokureva, kuti peji rakabatanidzwa kune vamwe vechitoro chimwe chete. Izvi, zvitende kana kwete, zvinokutendera iwe kuti uvake "tangle", kunge dandemutande dandemutande uko mapeji ese akabatana kune rimwe nerimwe.
Zviri Mukati. Izvo zvinonyanya kutevera fungidziro yekuti paunonyora zvakanyanya, zvirinani. Asi chenjera, hapana zvakapetwa zvemukati, kana kunyora kuti unyore, nekuti Google inozviona izvozvi uye zvinogona kukukuvadza. Ngaave ari mavara anoreva, asingadzokorori pfungwa imwechete chiuru. Iwe unofanirwa kupa chimwe chinhu mune icho chinyorwa.
Inoteerera saiti. Kana iwe wakambozvinzwa uye usingazive kuti chii, zvinoreva kuti webhu inogona kutaridzika zvakanaka pane nhare mbozha, kwete pakombuta yako chete. Uye chenjera, Google inopa zvakanyanya kukosha kune izvi.
Yekumhanyisa kumhanya. Iyo webhusaiti inotora nguva yakareba kurongedza chete chinhu chichaita kusaishanyira. Kwete kunyange Google. Ndokusaka zvakakosha kuongorora izvi.
Sitemap uye Robhoti.txt. Chekupedzisira, zviviri "zvemukati" zvewebhu. Iyo mepu inonyatso kuve XML faira iyo vanokambaira vanoshandisa kuratidza yako webhusaiti. Haisi yekumanikidza, asi kana Google ikakurudzira, ichave iri chikonzero. Panyaya yeRobots.txt iyo imwe faira yevanokambaira, uko panoti mapeji ausingade kuisirwa indexed.
Maitiro ekuvandudza iyo muCommerce
Hapana mubvunzo kuti, kana iwe ukakwidziridza eCommerce yako nezvatakamboona, uchawana mhedzisiro, uye uchaita Google padivi rako, kwete imwe nzira yakatenderedza. Nekudaro, kune mamwe manomano anogona kukubatsira iwe kugadzirisa iyo iri-peji SEO yechitoro chako chepamhepo:
Shandisa mazwi akakosha. Kuti uite izvi, tsvaga zvishoma uye uone kuti vashandisi vanotsvaga sei kushandisa iwo mazwi akakosha pane webhusaiti yako. Kuti uite izvi, unogona kushandisa Google Trends kana zvishandiso zvekubhadhara zvinokutungamira pane akanakisa mazwi.
Ngwarira zvikamu uye ma tag. Ivo vakakosha kwazvo uye saka hauzove chete nekuisa pamwechete saiti iri nyore kufamba nayo, asi zvakare kana zvasvika pakuisa indexing. Ehe, usaise akawanda mavara ezvinyorwa, uye kana zvichibvira muzvikamu sarudza imwe chete kuti iwo mapeji arege kuteedzerwa.
Gara wakatarisira shanduko kubva kuGoogle. Nguva zhinji, Google inoshandura nhungamiro dzayo, ichigadzira izvo zvakamboshanda, izvozvi hazviite, kana zvakatoipa, zvinokuranga. Saka edza kudzora nhau dzeGoogle kuti dzienderane neyokutanga.
Nenzira iyi, iwe uchave nechokwadi chekuti pane-peji SEO iri parutivi rwako muCommerce yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » SEO pane peji